Isitudiyo esihle esizimeleyo ngokupheleleyo kwi-4 km ukusuka kwi-metro
Isitudiyo esizimeleyo ngokupheleleyo kwi-4 km ukusuka kwi-metro
Isitudiyo esine-27m² egcwele ngokupheleleyo.
Ibekwe ngokufanelekileyo kufuphi neToulouse (i-12 km ukusuka kwiziko), i-metro (i-4 km), indlela ye-ring (4 km), isikhululo seenqwelomoya saseBlagnac (i-15 km) kunye neendawo eziphambili zabakhenkethi. Kwimeko ezolileyo kakhulu
Indlu ecocekileyo kakhulu, ihlaziyiwe.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, isitovu, i-extractor, i-microwave, i-oveni enkulu, umenzi wekofu, umatshini wokuhlamba, isitya esipheleleyo, igumbi lokuhlambela, i-TV ye-LED, ibhedi esemgangathweni eyi-160.
Ulwazi ngeCovid 19:
Siyazihlonipha iiprothokholi zokucoca ukuze sigcine ucoceko olugqibeleleyo kwaye siqinisekise ukhuseleko lwakho phambi kokufika kwakho. Ngexesha lokuhlala kwakho siya kukubonelela ngejeli ye-hydro-alcoholic kunye nesitshizi sokubulala iintsholongwane.
Unenketho yokufika kunye nokushiya indawo yokuhlala ngokuzimeleyo, konke okufuneka ukwenze ukusibiza okanye usishiye umyalezo, siya kukunika imiyalelo. Kodwa thina, kwabo banqwenelayo, sihlala sikhona.
Enkosi ngokuthemba kwakho kwaye uhlale kakuhle!
Indawo yokuhlala izimele ngokupheleleyo kwindlu yethu enkulu.
Unendawo yokupaka enkulu emnyango wendlu apho unokupaka lula.
4.96 · Izimvo eziyi-203
Indawo ezolileyo kakhulu.
Indlu yethu ibekwe kumathambeka eCastanet Tolosan, kumda weAuzeville Tolosane, kwindawo efileyo. Uya kuvuswa kukuntyiloza kweentaka!
Sikwiikhilomitha ezili-12 ukusuka kumbindi weToulouse. 3 km ukusuka Canal du Midi, iyilungele ukunyuka intaba okanye ukukhwela ibhayisikile, 2 km ukusuka kwisakhiwo kwezolimo Auzeville, lo INRA, isikolo zobugcisa Esma ETPA, esondele Airbus ukuziphendulela, technopole de labege, umzi indawo ...
Sisesandleni sakho ngexesha lokuhlala kwakho. Ungalibazisi ukuqhagamshelana nathi okanye ukunkqonkqoza kumnyango wethu ukuba sikho!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Castanet-Tolosan